> Resource> Video> Olee naghachi Videos si Kodak Playsport camcorder
Enwere m ike Naghachi ehichapụ Videos si Kodak Playsport camcorder?
Hi, m nwere Kodak Playsport camcorder na m dị nnọọ dere a video ezinụlọ m. Ọ dị m ka nwere ike accidently ehichapụ ya. Nke a video dị ezigbo mkpa ka m na m na-eche ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ ọ bụla na m nwere ike inwe ya azụ.
Dabara nke ọma, ọ bụrụ na ị na-eji gị Kodak Playsport camcorder mgbe video ehichapụ, na ị na yiri ka weghachite ya na a Kodak Playsport camcorder video mgbake. N'ihi na ehichapụ video bụ ka gị na Kodak Playsport camcorder si nchekwa media na ọ bụ naanị akara dị ka keerughi data site usoro.
Wondershare Photo Recovery Ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac-enyere gị aka naghachi vidiyo si na Kodak Playsport camcorder na ya dị ike na-adịghị ize ndụ mgbake atụmatụ. N'agbanyeghị gị Kodak Playsport camcorder videos na-efu n'ihi nhichapụ, kaadị formatting, usoro njehie ma ọ bụ ọbụna virus agha, ị nwere ike mgbe niile eji nke a usoro iji naputa ha. Plus, ị pụrụ iji ngwá ọrụ a na-agbake ọdịyo faịlụ na foto ndị si gị Kodak Playsport camcorder kwa.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Photo Recovery naghachi ehichapụ vidiyo si na Kodak Playsport camcorder ugbu a!
Naghachi Videos si Kodak Playsport camcorder na 3 Nzọụkwụ
Ugbu a, m ga-egosi gị otú naghachi Kodak Playsport camcorder video na Wondershare Photo Recovery maka Windows. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị nwere ike hazie mgbake na yiri arụmọrụ kwa.
Nzọụkwụ 1 Mgbe wụnye na launching Wondershare Photo Recovery na kọmputa gị, ị ga-enweta a window ngosipụta niile na-akwado ngwaọrụ.
Ị dị nnọọ mkpa pịa "Malite" na-amalite Kodak Playsport camcorder video mgbake.
Cheta na: Biko jikọọ gị Kodak Playsport camcorder ma ọ bụ ya nchekwa kaadị gị na kọmputa.
Nzọụkwụ 2 Mgbe ahụ usoro ihe omume ga-egosi draịva / partitions na kọmputa gị. Ị nwere ike họrọ otu maka gị Kodak Playsport camcorder ma ọ bụ ya nchekwa kaadị wee pịa "iṅomi" na-amalite ịgụ isiokwu furu efu videos na ya.
Nzọụkwụ 3 Mgbe scanning, hụrụ data na gị Kodak Playsport camcorder ma ọ bụ ya na kaadị ebe nchekwa ga-egosipụta na 3 faịlụ na ụdị: "Audio", "Photo" na "Video".
Biko ele hụrụ video aha ego ma gị furu efu videos nwere ike natara ma ọ bụ. Mgbe ahụ ị pụrụ họrọ gị furu efu videos na pịa "Naghachi" iji họrọ a ebe na kọmputa gị na-azọpụta ha.
Cheta na: Iji zere data overwritten, biko adịghị na-natara videos azụ gị Kodak Playsport camcorder n'oge mgbake. Ị nwere ike na-agbalị na-ebufe ha gị camcorder mgbe e mesịrị.
Olee otú iji tọghata gụgharia Video ka MP3?
Olee otú dezie VOB Video Files na Windows na Mac